I-WordPress: Yongeza uMyalezo oPhezulu weBar | Martech Zone
NgeCawa, ngo-Novemba 27, 2011 NgoMvulo, Novemba 28, 2011 Douglas Karr
Ngesi siza esitsha, bendifuna i ibha ephezulu yeWordPress kangangexesha elithile. Uyilo lwethu lomxholo wokugqibela eneneni lwalunecandelo elipheleleyo elinokutsalwa libhengeze ezethu imeyile yorhumo. Oku kunyuse inani lababhalisi ngokubaluleke kakhulu kangangokuba ndibandakanye umhlaba wokurhuma ngqo kwintloko yomxholo.
Ngoku bendifuna i ibha ephezulu ukugcina abafundi benolwazi kuwo nawuphi na umyalezo ophambili esifuna ukubakhumbuza ngawo… kubandakanya iindaba kunye neziganeko. Ndiza kubhala oku ngqo kumxholo wethu kodwa ndifumene I-WP-Topbar, iplagi ebhaliweyo ephezulu ebhaliweyo yeWordPress. Bekukho abanye ngaphandle apho banezinye izinto… njengokujikeleza imiyalezo okanye ukucwangciswa kwemiyalezo, kodwa ukulula kwale iplagi kuboyisile.
Ndiyayixabisa into yokuba ibar ephezulu ibingafakwanga khowudi phezulu kumxholo wephepha; Endaweni yoko, iveliswe ngamandla kwaye ivele ngoseto olubandakanya ukulibaziseka kunye nesantya sokubonisa… ukubamba okuhle ngokwenene! Ungayilawula imibala (kunye nomfanekiso ongasemva) webar, umyalezo, ukongeza ikhonkco, kwaye ufake i-CSS yakho kuwo. Ulawulo lukwanemboniso yangaphambili ukuze ujonge lonke utshintsho lwakho ngaphambi kokuba ulubeke bukhoma.
Qaphela, kukho ezinye iiplagi zebar ephezulu ngaphandle kwintengiso ezibiza imali… kodwa ndicinga ukuba le ibaluleke ngaphezulu!
EZINTSHA: Ndenze uhlaziyo kwiplagi. Ngoku iyalayisha kwi-wp_footer kune-wp_head (leyo yi-WordPress API talk) ndaye ndayihlaziya i-div ukuze ndibe ne-ID kunye nesitayile sokulungisa ibha kunokuba ndinaso isihlobo. Ngale ndlela, ibha ihlala ibekwa ngelixa uskrolela ezantsi iphepha.
tags: ibha yemiyalezoumyalezo weplagi yebaribar yomsebenziibha ephezuluiplagi ephezulu yebhaiplagi yamagamaibha ephezulu yegamawp_footerwp_intloko
Nov 27, 2011 ngo-7:10 PM
Nov 27, 2011 ngo-7:40 PM
Ngomhla wama-11 ku-Disemba 2011 ngo-1: 18 AM
Ibha yomyalezo ephezulu iyavela ngokwenene.
Ngomhla wama-11 ku-Disemba 2011 ngo-1: 45 AM
Mar 21, 2012 ngo 10:17 PM
Ndizamile ikhonkco lakho kodwa iplagin ayisekho. Ndingayifumana phi Karr?
Sep 7, 2012 kwi-8: 51 AM
Kutheni lento ingandisebenzeli nje? Ndazama le plugin kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo kwaye andizange ndikwazi ukuba njani. Ifakwe ngokugqibeleleyo kwaye ndilawule izicwangciso ngokuchanekileyo ndiyacinga kodwa ayibonakali kwiphepha lasekhaya okanye kwi-id yephepha endiyibeke kuyo. Ngoku kwandithatha ngaphezu kweyure ukuwenza. Ndihluthi. Uncedo lomntu!
Ewe ndawabeka kakuhle amaxesha. (kwi-millisecods) kunye nomhla kwakhona. Ndikhumbula ntoni ngoku?
Sep 7, 2012 kwi-9: 26 AM
Mhlawumbi uhlobo oluthile lwengxabano nenye iplagin? Unokuzama ukukhubaza zonke iiplagi kwaye usebenze nje enye ukuze ubone ukuba kwenzeka ntoni.
Mar 19, 2013 ngo-1: 03 AM
Yasebenza emva kokuzama izinto ezininzi. Oku kuyilungisile-ukuseta kwakhona kwindalo. Inguqulelo yangoku isebenza ngaphandle kwengxaki
Nov 26, 2012 ngo-5:41 PM
Enkosi ngesabelo, kanye le nto bendiyijonga.
Oktobha 21, 2013 ngo-5: 08 PM
Enkosi ngesithuba esikhulu. Bendijonge kanye le. Nangona kunjalo bendikhangela enye indlela “yebhari molo” kwaye akukho nanye ebonakala indisebenzela. Enkosi ngesi sithuba sinengqiqo.